Thursday November 02, 2017 - 11:12:06 in Wararka by Super Admin
مدرسة الضياء الإسلامية في
Wararka ka imaanaya Asmara ayaa sheegaya in kumanaan qof oo muslimiin ah ay isugusoo baxeen fagaarayaasha waaweyn ee magaalada waxayna isku dhaceen ciidamo booliska katirsan.
Video lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada Booliska oo rasaas nool nool u isticmaalaya dadka muslimiinta ah ee dhigaya kacdoonka ay ku difaacanayaan sharafkooda.
Dibad baxyada ayaa bilaawday kadib markii Amar ay soo saartay dowladda Eereteria ku mamnuucday dhammaan hawiyadda muslimiinta ee wadanka sida Tarbiyada islaamiga in lagu daraaseeyo madaarista iyo gabdhaha iyo wiilasha lakala saaro marka ay iskuullada wax ku baranayaan.
Laba isbuuc ka hor ayay ciidamada Booliska magaalada Asmara waxay xireen Maamulaha Madarasada islaamiga Aldiyaa sheekhda da’da ah ee lagu magacaabo Muuse Muxamed Nuur arrinkaas oo sare uqaaday carada dadka muslimiinta.
Mas’uul u hadlay kooxaha mucaaradka dibad joogga ah ayaa wakaaladad wararka ufaafisa wadanka Talyaaniga u sheegay in 28 qof oo dibad baxayaal ah lagu dilay toogasho ay fuliyeen ciidanka booliska.
Nasrudiin Cali oo mucaaradka katirsan ayaa sheegay in ciidamada Taliska Afewarki ay 40 gaari oo nuuca xamuulka ah ku daabuleen boqolaal qof oo ay ku qabteen howlgallo ka dhacay Asmara.
Dowladda Ereteria oo taageera ka helaysa imaaraatka carabta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u damin laheyd hanaqaadka dadka muslimiinta ah sida uu sheegay madaxweyne Efewerki bishii Septmber isagoo magaalada Dubai kula kulmayay wasiirka arrimaha dibadda imaaraatka carabta.
Dowladda Ereteria waxay ku goodisay in ay xididada usiibi doonto dhammaan madaarista islaamiga ah ayna soo rogayso qawaaniin ad-adag oo caburinaya dadka muslimiinta oo 60% ka ah umadda kunool wadankaasi.
Ereteria waxay ku andacoonaysaa in xiridda Madarasada islaamiga Aldiyaa’ ay qeyb ka tahay olole ka dhan ah Ururka ikhwaanka oo madaaris iyo macaahid islaami ah ku leh inta badan magaalooyinka wadanka.
Muddo kabadan 30 sanadood waxaa wadanka Ereteria xoog ku heysta Efewerki kaasi oo askareyn qasab ah dul dhigay dhammaan muwaadiniinta ku dhaqan wadankaasi, Ereteria oo mar ahaan dal muslim ah ayaa si tartiib tartiib ah loogu rogayaa dal nasraani ama Kirishtan ah balse muslimiinta ayaan marna quusan oo wada dadaal ay diinta islaamka ku faafinayaan.
Dowladda imaaraatka carabta ayaa la wareegtay inta badan dekadaha Ereteria waxayna wadankaasi ka furatay saldhigyo melleteri tallaabadaas oo ciriiri sii gelinaysa dadka muslimiinta ah, arrinta layaabka leh ayaa ah in imaaraatka carabta ay taageerayso dhammaan tallaabooyinka lagu tahmiishinayo muslimiinta ee xukuumadda Asmara qaadday sida in hablaha muslimaadka ah aysan qaadan karin xijaabka iyo mamnuucista madaarista islaamiga ah.
Isha Muuqaalka: Aljazeera